Global Voices teny Malagasy » Manangana Zavakanto Sy Mozika Tsy Ahafahany Mody Ny Ankohonana Syriana Iray Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Manangana Zavakanto Sy Mozika Tsy Ahafahany Mody Ny Ankohonana Syriana Iray Ao Etazonia
Voadika ny 29 Jona 2016 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Etazonia, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zavakanto & Kolontsaina
Tetikasan'i Jumana Jaber antsoina hoe “Fitsaboana Shimika sy Fitaovam-piadiana Shimika.” Nilaza ilay Syriana artista fa mampifanindry ny niainany tamin'ny homamiadan'ny nono tamin'ny 2006 sy ny fanafihana ataon'ny governemanta Syriana Amin'ny vahoakany amin'izao fotoana izao. Sary nampindramin'ny Institute for International Education
Lahatsoratr'i Jason Strother  nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 21 Jona 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nampianatra zavakanto ara-maso tao amin'ny Oniversitem-panjakana Montclair ao amin'ny fanjakan'i Etazonia New Jersey hatramin'ny taona 2013 i Jumana Jaber. Somary miova kely tamin'ny asany nampianatra zavakanto sy fandravahana tantara tsangana tao an-drenivohitra Syriana, Damaskosy, izany.
“Vaovao tamiko avokoa ny zava-drehetra — rafitra vaovao, hafa avokoa ny zava-drehetra eto,” hoy i Jaber, 55 taona.
Anisan'ireo an-tapitrisan'ny Syriana nandositra ny tanindrazany hatramin'ny nanombohan'ny ady an-trano tamin'ny 2011 i Jaber sy ny ankohonany ahitana olona efatra. Saingy tsy monina any Etazonia amin'ny maha mpialokaloka ry zareo. Tonga noho ny fanampian'ny Institute of International Education’s Scholar Rescue Fund  na Sompitra Fanavotana Mpampianatra Ambony an'ny Ivontoeram-Panabeazana Iraisampirenena miorina ao New York ry zareo. Efa hatramin'ny taona 2002 ny vontoeram-Panabeazana Iraisampirenena no niezaka nampifandray Manampahaizana tratran'ny fanenjehana miisa 650 eo ho eo (maro amin'izy ireo no avy ao Iràka sy Syria) amin'ny sekoly maro ao Etazonia na any amin'ny firenena hafa azo antoka. Ifampizaran'ny Sompitra amin'ny (Sekoly) mandray azy ireo ny fandaniana roa taona voalohany amin'ny fametrahana ireo mpampianatra sy ny ankohonany. Izy ihany koa no mandamina ny indray andro mialoha ny fifanakalozan'ny mpamangy sy ny visa-n'ny miaraka aminy.
Nandositra ny ady tao Syria i Jumana Jaber ary mampianatra ao amin'ny kolejy iray ao New Jersey amin'izao fotoana izao. Sary nampindramin'ny Institute of International Education
Nilaza i Sarah Willcox, talen'ny sompitra fa ny karazan-dry Jaber sy ny ankohonany ireny no tian'ny sompitra ampiana.
“Mpisinta-kevitra ry zareo matetika,” hoy i Willcox. “Enjehina ny mpampianatra sekoly ambony satria ankatoavina sy hajain'ny olona eo amin'ny fiarahamoniny.”
Nanao ny zavakanto ho hafatra ara-politika i Jaber tao Damaskosy, ka tafiditra amin'izany ny hosodoko mampiditra sombin-tseza izay sariohatry ny fahefana ao Syria.
“Ny filoha, ny deba, ireo sheikhs izay milaza fa ity halal ary ity tsy halal, afa-manao ity ianao, tsy afa-manao ity ianao,” hoy izy. “Fehezin'izy ireo ny zava-drehetra, ry zareo izay mipetraka amin'ny seza hita na aiza na aiza ireo.”
Raha niofo ho ady an-trano ny fitroarana nanohitra ny governemanta Syriana, dia nilaza i Jaber fa efa tsy ho azo tanterahina intsony ny fandehanana mivoaka ivelan'i Damaskosy. Avy eo tratran'ny fanafihana ny oniversite niasany niaraka tamin'ny vadiny izay artsita mpanefy tanimanga.
“Nitondra ny mpianatra tany an-toby izahay,” hoy i Jaber. “Matin'ny voavono ny sasany amin'ny mpiara-miasa amiko.”
Tratra tanatin'ny rotaka ihany koa ny zanaka lahimatoan'i Jaber, Yazan Al-Hajari . Tamin'izany fotoana izany izy nianatra mozika klasika tao amin'ny toeram-pianarana hira avo lenta tao Damaskosy ary nanana tarika manokana.
Sariohatry ny fahefana ao Syria ny seza, hoy ny Syriana artista Jumana Jaber. Nampindramin'ny Institute of International Education
“Tsy maintsy naka fanapahan-kevitra aho raha nanomboka tao Syria ny revolisiona,” hoy i Al-Hajari, izay 31 taona amin'izao fotoana. Ary rehefa nanatri-maso ny hery nampiasaina handravana ny fiokoana izy dia nifidy ny hijoro miaraka amin'ny revolisina — ara-politika sy ara-kira. Notazonina fotoana fohy i Al Hajari noho ny fitabatabana tamin'ny governemanta. Nanoratra hira mitsikera ny mpitondra sy ny fampitam-baovao tao Syria ihany koa izy. Rehefa namoaka azy tao amin'ny YouTube izy tamin'ny 2012, dia nanahy ny ainy ka nandositra nankany Berota.
Avy eo ihany koa ny ambin'ny ankohonana nandositra nankany Libanona, izay nampandehanana an'i Jaber ho ao amin'ny Sompitra Fanavotana Mpampianatra Ambony ary nomena asam-pampianarana ao New Jersey. Monina ao amin'ny tanàna itatr'i Nutley, tokony ho 25 kilaometatra ivelan'i New York City.
Saingy visa fotoana miserana ihany no ahafahany mipetraka ao amin'ny firenena. Koa dia nangataka ny sata maha mpialokaloka — fombafomba mety maharitra an-taonany maro i Jaber, ny vadiny ary ny zanany mirahalahy.
Nilaza i Jaber fa mahatsiaro ho malalaka izy ao Etazonia hanangana zavakanto izay tsy ho azony natao ao Syria. Manahy ny amin'ny fitomboan'ny fankahalana Miozolomana, anefa, ny fianakaviany taorian'ny fanafihana tao Orlando sy San Bernardino — na dia tsy mpivavaka mavitrika aza izy ireo. Nilaza i Jaber fa miezaka izy tsy hahazo azy ity karazan-drivotra ity.
“Mankarary ahy ihany izy io,” hoy ravehivavy. “Saingy manana mpiara-miasa sy namana mahafinaritra tokoa aho izay mahalala ny toe-draharaha misy anay.”
Nandositra an'i Syria i Yazan Al-Hajari rehefa namoron-kira nitsikera ny fitondrana Syriana. Tompon-tsary: Jason Strother
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/29/84564/
 Jason Strother: http://www.pri.org/people/jason-strother
 tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-06-21/syrian-family-new-jersey-create-art-and-music-they-couldnt-back-home
 Institute of International Education’s Scholar Rescue Fund: http://www.scholarrescuefund.org/
 Yazan Al-Hajari: https://soundcloud.com/hajari-yazan